Inobatsira sei Search Engine Optimization yebhizimusi, zvikurukuru maererano neyenyu duku yekutumira-purojekiti?
Nhasi, vanhu vakawanda vari kuwedzera kutenga kwavo vachishandisa simba guru uye nyore kweIndaneti. Ndokusaka madonhippers ava nzvimbo dzinonyanya kuzivikanwa pakuita zvekutengesa paIndaneti uye kuwana chero chero chinhu chipi zvacho chauri kutsvaga. Uye zvino zvizhinji zvekutenga kwakadaro zvinoshandiswa kunyange nyore, sezvo vanhu vari kungoshandisa injini yekutsvaga kuti vapinde mubvunzo wechirungu, uye pakupedzisira, tsvaka zvavanoda. Uye pano inouya nyika ye SEO! Asi kuti ungashandisa sei mikana inenge yakawanda yeSearch Engine Optimization yebhizimisi iwe uri kushanda mumarara-kutumira mode? Ndinokurudzira kuva nenguva pfupi kutarisa kuburikidza nemazano ekutanga pasi apa. Ndinotarisira kuti vachabatsira mishonga yakawanda yekuderedza-kutumira kuti vapone munyika yekumanikidzwa kwemakwikwi echisimba kubvira pakutanga. Heino ivo!
Ita Zita Rakarurama Rokutsvakurudza neTel Tail Key Keywords
Chokutanga, kuita Search Engine Optimization yebhizimisi, iwe unorayirwa kuti itungamirire zvakakodzera keyword kutsvakurudza. Ndiri kureva pano iwe uchada kufungisisa pamusoro pemamwe mazwi nemitsara, izvo zvakakodzera zvakanyanya bhizinesi rako, uyewo uye inogona kushandiswa nevashandisi vekutsvaga mutsva pavanotsvaka zvigadzirwa kana mabasa. Icho chinyengeri ndechokuti uwane hutano hune hutano hwakanaka pakati pekukurumbira uye kukwikwidzana kwakanyanya mu niche. Ndinoreva kuti pane zvingava makumi ezviuru zvezvikumbiro zvekutsvaga se "macbook pro 13", asi zvakanyanya kudarika avo vakaita se "mutengo wakanakisisa wekuda macbook pro 13 retina kuratidza". Ingochengetedza izvozvo mupfungwa paunosarudza yakarurama kwenguva yakareba misoro yezwi rako rewebhu.
Itai Zvinhu Zvakasimba Zvakagadzirisa Chiitiko
Yeuka - zvinyorwa zvako ndeye mambo. Usambofungidzira nguva yako pakuedza kuumba yakakwirira-yehutano, hupfumi nerefu muswe mutsara mazwi. Pfungwa iyi iri nyore - iwe unongoda kuve nehuwandu hwako sehunyanzvi (kuverengera - inobatsira) kune vashanyi sezvinobvira. Kuita izvi nenzira iyi, inzwa wakasununguka kuvhara webhusaiti yako yehupenyu nehutano hwakasiyana-siyana hunoshandiswa nehutaneti-hune mavhidhiyo eYouTube. Izvo zvichapa vashanyi vako chikamu chezano rakanaka, kudzidzisa, kana tsanangudzo yezvigadzirwa nemitemo, zvichiita kuti zvive zvepamusoro zvekutengeserana. Panguva imwe chete, ramba uchicherechedza zvaunofunga nezvako, kunyanya kubva pakuona kwezvinjini. Kuita saizvozvo, usakanganwa kuti iwe unoda izvozvo kuti uonekwe nevatsvaga vekutsvakurudza, vanoita zviri nani vakanyorerwa navo, uye saka vakatevedzwa zvakakwirira mumigumo yekutsvaga kweGoogle. Ndiyo nzira yakarurama yekuendesa mabhizimusi ekutumira-kutengesa kwepaIndaneti, iko kupi zvako munyika.
. Zvinoreva kuti iwe unofanirwa kunge uine sarudzo yemasikirwo akareruka achibatanidza webhusaiti yako nemimwe mitsamba inowanikwa muIndaneti kuti uwedzere kushanyira, saka kuwedzera marwara ako, kukwidza nzvimbo yako yezvino mumigumisiro yekutsvaga kweGoogle, uye kupa ruzivo rwakawanda rwevatengi vasina kusimbiswa, izvo zvinogona kuva ishanduka kuva chaiye. Usatongedza maitiro ekugadzira zvinyorwa pamaforamu, mavhidhiyo achangobva kubudiswa neYouTube, uye zvakasiyana-siyana zvehupfumi. Vanogona kuva chigadzirwa chaicho chaicho kana chakashandiswa nouchenjeri. Kana ndiri ini, ndinorayira kupa vhizimisi kuti vakuitire mabasa aya zvichida kuburikidza nematanho ekutanga ebhizimisi rako. Chero chero basa rako riri, iwe hauzombozvidembi, ndine chokwadi.
Pakupedzisira, zvikomborero chaizvo zvekutsvaga injini yekutsvaga kwebhizimisi hazvigoni kufanana nemaviri kana matatu chete ndima Source . Asi ndinovimba kuti mitsara yangu shomanana inobatsira vamwe vanodzika madonpshippers zvakakwana, saka ndinoenda kunotaura zvakanaka pano!